Company sirogani: THE BEST PRODUCTS VARI FROM SIMUKAI Steel
Company Qualification: The inoomerera boka kune nheyo "Quality ndiyo yokutanga, utariri ndiyo zvinokosha". Kambani yedu yave vanokwanisa ISO9001: 2008, API advertising, EU chitupa, CE chitupa. China kupatsanura vanhu chitupa yepamusoro utariri hurongwa advertising, China kupatsanura vanhu fekitari mvumo chitupa.
Company Service: Simuka iri vakapakata akawanda yemhando kugadzirwa mitsetse uye chinokosha zvokushandisa simbi mutopota Anti ngura, zvichiita vanokwanisa taita dzakasiyana-siyana simbi mutopota Anti-ngura ouinjiniya akadai kuroora uye kaviri Fusion waakaita epoxy (FBE) upfu unhani. Double polyethylene (2Pe) uye 3PE unhani, kaviri polypropylene (2PP) yokunamisa, 3PP rokunze unhani, uye mukati dzokunze epurasitiki coatings. Mukuwedzera, kambani kunogonawo jasi simbi mutopota pamwe Anti-ngura pendi kusanganisira IPN8710 non-hunokachidza unhani pamusoro simbi mutopota porusvingo, epoxy marasha tara unhani, epoxy nebwe unhani, uye simende dhaka lining.
Kuisa mutengi wokutanga akatora unhu sezvo upenyu hwayo. The kambani basa mukuru mainjiniya pamwe kugadzirwa ruzivo uye yakasimbiswa nokurondedzerwa kuti pre-sale, mu-sale uye pashure-sale mabasa. It anoita chinhu kunopindirana unhu kudzora rose muitiro kuti zvinhu zvedu uye mabasa zvakawanda yakavimbika, pave refu pamwe uye ukama mose pamwe mutengi.